फर्सीको मुन्टाको तरकारी खाने गर्नु भएको छ ? फर्सीको मुन्टा खानुका फा'इदा
Home समाचार फर्सीको मुन्टाको तरकारी खाने गर्नु भएको छ ? फर्सीको मुन्टा खानुका फा’इदा
फर्सीको मुन्टाको तरकारी खाने गर्नु भएको छ ? फर्सीको मुन्टा खानुका फा’इदा
६ कार्तिक २०७८, शनिबार ०८:४३
हरियो सागपात मानव स्वा’स्थ्यका लागि नि’कै ला’भदायक मानिन्छ । अझ हरियो साग खानाले आँखा तेजिलो हुने चि’कित्सकहरु बता उँछन् । हरियो सा’गसब्जीमध्ये फर्सीको मु’न्टामा अझ विशेष गु’ण हुन्छ । जुन मानव स्वा’स्थ्यका लागि निकै ला’भदायी हुन्छ । त्यसो त फर्सी पनि खानु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै ला’भकारी हो । तर, फर्सीको पात वा मुन्टा खानाले हामी विभिन्न रोगबाट जोगिन सक्छौँ । फर्सीको पातको साग वा फर्सीको मुन्टा खानुको फा’इदा बारे सबैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
फर्सीको साग विभिन्न पौ’ष्टिक त’त्वले भरिएको हुन्छ । फर्सीको मुन्टा भिटामिन ई, सी, ए, बी-६, पोेटासियम, फोलिक एसिड, क्या ल्सियम, कपर, प्रोटिन, म्याग्नेशियम, आइरन, फाइबर, फस्फोरस जस्ता ख’निज पदार्थको राम्रो स्रो’त हो । मानव स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नको लागि शरीरमा यी सबै खनिज तथा पौ’ष्टिक तत्वको आ’व श्यकता पर्दछ । युएसडीए नेशनल न्युट्रिएन्टको अ’ध्ययन अनुसार फर्सीको पातमा यति धेरै गुणहरु हुन्छ कि जसले ख’तरनाक रो’ग बाट जो’गिन म’द्दत गर्छ ।
फर्सीको साग आफ्नो नियमित भो’जनमा खानुहुन्छ भने उ’च्च र’क्त चाप, कोलेस्ट्रोल, क्यान्सर जस्ता खतरनाक रोगबाट सु’रक्षित बन्न सकिने चिकित्सकहरु बताउँछन् । फर्सीको मुन्टा
खानुका फाइदा : फर्सीको पातमा पाइने एन्टी–अक्सीडेन्टले ब’ढ्दै गरेको उमेरलाई छे’क्दै जवान देखाउनमा सहयोगी हुन्छ । मानिस हरुमा उच्च को’लेस्ट्रोलको समस्याले पी’डा दिएको हुन्छ । तर, कोले स्ट्रोलको समस्याबाट राहत पाउनका लागि फर्सीको मुन्टाको साग भने निकै उ’त्तम मानिन्छ ।
फर्सीको पातमा पाइने फा’इबरले कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्नुका साथै तपाईँको मुटुलाई पनि स्वस्थ राख्नमा सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यस्तै फर्सीको मुन्टाको साग खाँदा आँखा ते’जिलो बन्छ । फर्सीको पातमा भिटामिन ए प्र’शस्त मात्रामा पाइन्छ । जुन हाम्रो आँखाको लागि राम्रो मानिन्छ । यसले प्रजनन क्षमतामा समेत वृ’द्धि गर्ने गर्छ ।
फर्सीको मुन्टाको सागले न’ष्ट भएको टेस्टीकुलर र स्पर्म बन्ने प्रक्रियालाई म’द्दत पुर्याउँछ । जसको मद्दतले प्रजनन क्षमतामा वृ’द्धि हुन्छ । त्यस्तै, छालाका सुन्दर बनाउँ पनि फर्सीको मुन्टा वि’शेष मान्छि । फर्सीको पातमा प’र्याप्त मात्रामा भिटामीन सी पाइन्छ । जुन तपाईँको छालाको लागि फा’इदाजनक हुन्छ ।
भिटामीन सी ले छालामा भएको मृ’त त’न्तुलाई जीवित बनाउन म’द्दत गर्नुका साथै छालालाई स्वस्थ बनाइ राख्छ । यसले म’धुमेह रोग नियन्त्रणमा पनि म’द्दत पुर्‍याउँछ । फर्सीको मुन्टामा हाइपोग्लि सिएमिक नामक त’त्व हुन्छ जसले ग्लुकोजको मात्रालाई कम गर्नमा म’द्दत गर्छ ।
त्यतिमात्र नभएर फर्सीको मुन्टामा ख’तरनाक रोग क्यान्सरालाई समेत निको पार्ने गुण हुन्छ । फर्सीको पातमा पाइने फाइबरले क्या ‘न्सर कोषीकाहरुलाई रो’क्नमा म’द्दत पुर्याउने चि’कित्सकहरु बता उँछन् । यसले पा’चन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्छ, पाँचन प्रणाली स्वस्थ हुनु भनेको अ’धिकांश रोगबाट छु’टकार पाउनु पनि हो ।
अघिल्लो पोष्टपेट पुट्ट बाहिर नि’स्किएर ल’ज्जित हुनुहुन्छ ? बिहान उठ्नेबित्तिकै गर्नुहोस् मात्र यी काम !
अर्को पोस्टकपाल नुहाउने बित्तिकै यी गल्ती त गरिरहनु भएको छैन ? सावधान !